Firefox 85 waxay timid iyadoo sagootinaysa Flash iyo horumarin kala duwan | Laga soo bilaabo Linux
Firefox 85 waxay timid iyadoo sagootinaysa Flash iyo horumarinno kaladuwan
Nooca cusub ee biraawsarka webka ee caanka ah Firefox 85 horey ayaa loo sii daayay iyo qaabkan cusub waxaa jira dhowr isbeddel oo muhiim ah kaas oo tirtirida taageerada Flash ay ka muuqato, iyo waliba hagaajin ka dhan ah la socoshada isticmaalaha, hagaajinta maareeyaha sirta ah iyo waxyaabo kale.
Intaa waxaa dheer tabo cusub iyo hagaajinta cilladaha, Firefox 85 waxay hagaajisay nuglaanta 33, oo 25 kamid ah loo calaamadeeyay inay khatar yihiin. 23 nuglaanta (oo loo soo ururiyey CVE-2021-23964 iyo CVE-2021-23965) waxaa sababa dhibaatooyin xagga xusuusta ah sida qulqulka buundooyinka iyo helitaanka meelaha xusuusta ee horay loo sii daayay.
1 Astaamaha cusub ee cusub ee Firefox 85
2 Sidee loo rakibaa nooca cusub ee Firefox 85 ee Linux?
Astaamaha cusub ee cusub ee Firefox 85
Qaabkan cusub ee Firefox 85 oo ku taal Linux, mashiinka ka kooban WebRender-ka ayaa awood u leh loogu talagalay kalfadhiga deegaanka isticmaalaha GNOME ee adeegsanaya hab maamuuska Wayland. Sii deyn hore, Taageerada WebRender waxaa loo sahlay GNOME deegaanka X11. Isticmaalka WebRender-ka Linux wuxuu wali ku xaddidan yahay kaararka sawirada ee AMD iyo Intelmaaddaama ay jiraan arrimo aan la xallin marka laga shaqeynayo nidaamyada darawalka lahaanshaha ee NVIDIA iyo darawalka bilaashka ah ee Noveau.
Isbeddel kale oo muuqda ayaa ah kaas waxay awood u siisay in ay curyaamiso khadadka ka takhaluso bogga iyo shaashadda tab cusub iyada oo aan naafada laga hayn dhammaan qalabka.
Intaa waxaa dheer, waxaa la xusay in in Taageerada Firefox 85 ee Adobe Flash plugin ayaa laga saaray, tan kadib markii Adobe si rasmi ah u dhameystirtay taageerada Flash technology bishii Diseembar 31, 2020.
Gaar ahaan url ka sokow, barroosinka waxaa lagu daray qaybta ugu weyn - kaas oo bogga ugu weyn uu ka furmayo, xaddidaadda baaxadda khasnadaha loogu talagalay qoraallada raadraaca dhaqdhaqaaqa barta hadda jirta oo keliya (qoraalka iframe ma awoodi doono) inuu hubiyo haddii kheyraadka laga soo raray goob kale).
Sidoo kale iskuxirka fududeeysan ee kaydinta calaamadaha bogagga iyo helitaanka calaamadaha ayaa la muujiyey. Bogga si aad u furto tab cusub, baarka calaamadaha ayaa ugu shidnaa markii loo eego. Sida caadiga ah, waxaa la soo jeediyay in lagu keydiyo calaamadaha bogga calaamadaha oo aan lagu kaydin qaybta "Calaamadaha kale".
Maamulaha erayga sirta ah waxay bixisaa suurtagalnimada in la tirtiro dhammaan akoonnada la sifeeyay hal mar, adiga oo aan gooni gooni u tirtirin shay kasta oo ku soo baxay liiska. Hawsha waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo menu-ka macnaha guud «…».
Halkii laga isticmaali lahaa nidaamka 'ESNI' (Encrypted Server Magaca Tilmaamaha) si loo kaydiyo macluumaadka ku saabsan cabiraadaha kal-fadhiyada TLS, sida magaca domain ee la codsaday, taageerada ECH (Macluumaadka Macaamiisha 'Encrypted Hello') ayaa la hirgeliyay oo ay sii wadaysaa horumarinta ESNI waxayna ku jirtaa marxaladda qabyada ah ee sheeganeysa inay tahay heerka IETF.
Ugu dambayntii Firefox 86 ayaa gashay tijaabinta beta noocana wuxuu u taagan yahay ka mid noqoshada aasaasiga ah ee taageerada loogu talagalay qaabka muuqaalka AVIF (Qaabka Sawirka ee AV1), kaas oo adeegsada teknoolojiyada isku-soo-xoqitaanka intra-frame ee qaabeynta qaabeynta muuqaalka AV1. Awood lagu daray si aad ugu aragto boggaga HTML ee maxalliga ah qaabka akhristaha.
Daahfurka waxaa loo qorsheeyay Febraayo 23.
Sidee loo rakibaa nooca cusub ee Firefox 85 ee Linux?
Isticmaalayaasha Ubuntu, Linux Mint ama waxyaabo kale oo ka soo jeeda Ubuntu, Waxay ku rakibi karaan ama cusbooneysiin karaan noocyadan cusub iyagoo kaashanaya PPA-da biraawsarka.
Tan waxaa lagu dari karaa nidaamka adoo furaya terminal isla markaana ku fulinaya amarka soo socda:
Tan ayaa la sameeyay hadda waa inay ku rakibaan:
Loogu talagalay dadka isticmaala Arch Linux iyo noocyada kala duwan, kaliya ku ordo boosteejada:
Hada kuwa isticmaala Fedora ama qaybinta kale oo laga soo dheegtay:
Finalmente haddii ay yihiin isticmaaleyaasha OpenSUSEWaxay ku kalsoonaan karaan kaydadka bulshada, oo ay kaga dari karaan Mozilla nidaamkooda.
Tan waxaa lagu samayn karaa terminal iyo dhexdeeda adoo garaacaya:
para dhammaan qaybinta kale ee Linux waxay soo dejisan kartaa xirmooyinka binary ka xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Firefox 85 waxay timid iyadoo sagootinaysa Flash iyo horumarinno kaladuwan
Aniga ahaan waxa ugu fiican waa mawduuca supercookies iyo kala qaybsanaanta ...
Waxaan muddo dheer filayay horumarkan ku saabsan asturnaanta.
Waxaan hayaa kumbuyuutar leh 960 MB oo RAM ah, 2 GHz, waxaanan isticmaalayaa Basilisk, oo ah fargeeto Palemoon ah, waxaan u isticmaalaa nuuca ay tahay 2018, halkaas oo aysan wali ka saarin WebExtensions ... Waxaan la yaabanahay Firefox 85 ayaa ka shaqeyn doonta kumbuyuutarkan, waxa aanan u maleyneynin ... Ilaa iyo inta Firefox ay sii wado cunista qadar badan oo xusuus ah, waxaan ku dhajin doonaa Basilisk, Puppy Linux ... Ma haysto wax sawiro ah kaarka, waa inaan ku baashaalnaa, wali waxaan raadinayaa waxyaabo kale, labada waxyaalood ee xun ee ku saabsan Firefox waa kayd iyo telemetry, waxyaabo aan loo baahnayn.
Ku jawaab ArtEze
Qorsheeye: Codsi loogu talagalay raadinta howlaha, mashaariicda iyo ujeeddooyinka
U nuglaanta halista ah ee sudo waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho mudnaanta xididdada